स्मार्ट ईयरफोन उत्तम प्रविधि सिद्धान्तको विश्लेषण गर्नुहोस्, तपाईंलाई कत्ति धेरै थाहा छ
बौद्धिक टेक्नोलोजी, हामीबाट धेरै टाढा, विज्ञान कल्पनिक ब्लकबस्टरमा मात्र देख्न सकिन्छ, अब हामी सजिलैसँग बुद्धिमान टेक्नोलोजी अनुभव गर्न सक्दछौं, एक सानो स्मार्ट ईयरफोन चाहिन्छ, तपाईं वातानुकूलनको सपना स्वचालित रूपमा महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, बत्तीहरू स्वत: बन्द हुन्छ, मात्र जस्तै ca हुनु ...
एक ब्लुटुथ हेडसेट लगाउनका शीर्ष छ लाभहरू के हुन्
१. आजका काम र जीवनमा सहयोगी टेलीकॉन्फरेन्सिंग भेट्नु सामान्य कुरा हो। यदि तपाईंले टाढाको स्थानमा एक घण्टासम्म फोन समात्नु पर्छ भने, तपाईंको घाँटी र हतियार धेरै दुखेको हुनेछ। मलाई विश्वास छ कि यस किसिमको पीडा र कष्ट भोगेका विद्यार्थीहरूले ब्लुटुथ हेडसे प्राप्त गर्न चाहान्छन्।
ईयरफोनको दैनिक रखरखाव
हेडफोन दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, सडकमा हिंड्दा धेरै मानिसहरूले यात्रा देख्न सक्दछन्, संगीतको आनन्द लिन हेडफोन लगाउनेछन्। अनुगमन हेडसेट पेशेवर रेकर्डिंग र खेलहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसको उत्कृष्ट मानव आवाजको कारण। तर यदि गलत भण्डारण र प्रयोगले क्षति गर्दछ भने ...
हाम्रो हेडफोन एक कम्पनी हो जसले उद्योग र नेकब्यान्ड इयरफोनको साथ व्यापार एकीकृत गर्दछ
२१-०3-०१ मा व्यवस्थापक द्वारा
हेडफोनको परिचयबाट सुरू गरौं। हाम्रो हेडफोन एक कम्पनी हो जसले उद्योग र नेकब्यान्ड इयरफोनको साथ व्यापार एकीकृत गर्दछ। मलाई विश्वास छ कि सबैलाई थाहा छ कि बजारमा हेडसेट शैलीहरू tws वायर्ड हेडसेट र वायरलेस हेडसेटहरू बाट बनेको छ, तर म विश्वास गर्दछु कि तपाईलाई सचेत नहुन सक्छ ...
Ks-017 को प्रदर्शन विशेषताहरु
१. केएस -१० Per को प्रदर्शन विशेषताहरू हेडसेटको व्यक्तित्व, सरलता र फेशनको डिजाइन अवधारणालाई समर्थन गर्दछ। हरियो वातावरणीय संरक्षण र संरक्षणको पर्यायवाची हो, र हाम्रो ०77 यी चरित्र वर्णन गर्दछ ...
ठेगाना: दोस्रो फ्लोर, न। १ 49,, शाही एवेन्यू, युआन्झउ टाउन, बोलुओ काउन्टी, हुइझाउ शहर, गुआंग्डोंग प्रान्त, चीन
इ-मेल: ज्याक @ फिटहेम